स्वास्थ्य – Korea Pati
December 7, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोरियन ले ‘फे नावा फे नावा ‘ भन्दै जिस्काउने गरेको छ? पेट घटाउनको लागी अपनाउनुस यि उपायहरु!
सिओल कोरियामा पेट बढेको खासै कसैले मन पराउदैनन,पेट बढ्यो भने कोरियन हरुले जिस्काउने गर्छन।फे नावा (पेट बढ्यो) भन्दै पेटमा देखाएर जिस्काउने यिनिहरुको ख्यालठट्टा भित्रै पर्दछ। यहाँका अधिकाँश मानिसहरु खानपान व्यायाम मा नियमित रुपमा ध्यान दिने हुनाले यिनिहरु स्वस्थ निरोगी तथा पेट समेट सामान्य हुन्छ।पछिल्लो समय नेपाल बाट रोजगारीमा कोरिया आएका यूवकहरुको पेट बढनेहरुमा कोरियन हरुले […]
December 22, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on भोजनको बर्गिकरण र मात्रा
जिवनशैली शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न, शरीरलाई चलायमान बनाउन, शरीरलाई निरोगी तुल्याउन हामीले बाहिरी स्रोतबाट खानापान ग्रहण गर्नुपर्छ । हामी हिँड्छौ, बस्छौ, उफ्रन्छौ, खेल्छौ, काम गर्छौ । यस अवस्थामा शरीरलाई चाहिने आवश्यक उर्जा खानपानबाटै प्राप्त हुन्छ । हाम्रो शारीरिक अवयव पनि कमजोर हुन्छ, त्यसमा क्षति पुग्छ । अतः त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पनि भोजन आवश्यक छ । […]
स्वच्छ र सुरक्षित खाद्यपदार्थका लागि यी कुरामा ध्यान दिऔँ
October 22, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on स्वच्छ र सुरक्षित खाद्यपदार्थका लागि यी कुरामा ध्यान दिऔँ
स्वास्थ्य नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहँदा दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व सुरु भएको छ। परिस्थिति प्रतिकूल भए पनि चाड मनाउन घरैपिच्छे आवश्यक सामाग्री किनमेल गर्न थालिएको छ। नयाँ लुगाफाटा र खाद्य सामग्रीको जोहो गर्न थालिएको छ। खासगरी खाद्य वस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने केही पक्षबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ। उत्पादक तथा प्रशोधनकर्ताको भूमिका:खाद्यवस्तुका […]
October 20, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on खराब आनीबानीले मुटु रोगको जोखिम
स्वास्थ्य मुटु रोगका लागि हाम्रो खानपान र जीवनशैली जिम्मेवार मानिन्छ । खराब खानपान, मद्यपान, धुमपान, रातो मासुको अत्याधिक सेवन र ऐशआरमपूर्ण जीवनशैलीले मुटु रोगको जोखिम बढाउँछ । एकातिर खराब खानपान अर्कोतिर निस्क्रिय जीवनशैली, यसले मुटुको कार्य प्रणालीलाई असर गर्ने नै भयो । हामीलाई समान्य लाग्ने कतिपय कुराले मुटुलाई भने रोगी बनाउँछ । जस्तो लामो समय […]
October 14, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on महिलाहरुले प्याप स्मेयर टेस्ट गर्नैपर्छ ?
स्वास्थ्य महिलाहरुमा पाठेघरको क्यान्सरको उच्च जोखिम हुन्छ । अतः पाठेघरको क्यान्सर पहिचान गर्न वा संभावित जोखिमबारे थाहा पाउनका लागि गरिने सस्तो, सरल र प्रभावकारी जाँच हो प्याप स्मेयर । चिकित्सकहरु भन्छन्, ४० बर्ष उमेर काटेका महिलाहरुले प्याप स्मेयर टेस्ट गर्नैपर्छ । यद्यपि यो एक पटक मात्र गरेर हुँदैन । बर्षमा एक पटक गर्न जरुरी छ […]
September 28, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कब्जियत : यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
आधुनिक जीवनशैली र अव्यवस्थित आहार–विहारले अधिकांश मानिसहरु कब्जियतको शिकार हुने गरेका छन् । कब्जियत नै अन्य पाइल्स, फिस्टुला, फिसरजन्य रोगको कारक समेत बन्न जान्छ । रोग वृद्धि हुने, अन्य रोगमा परिणत हुने वा रोग जटिल हुने यी तीनै अवस्थाका लागि हामीले खाने आहारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले कब्जियतका रोगीले पथ्य–अपथ्य आहारमा ध्यान दिन सके […]
जानाकारी हामी भन्छौं, बालबालिका भनेको काँचो माटो हुन् । उनीहरुलाई जस्तो स्वरुपमा पनि बदल्न सकिन्छ ।यद्यपि उनीहरुलाई कस्तो स्वरुपमा बदल्ने ? यसका लागि अभिभावकसँग त्यही कुशलता वा सीप हुनुपर्छ, जसले उनीहरुलाई एक सुन्दर रचनाको रुपमा बनाउन सकोस् । वालबच्चा राम्रो हुनु वा नराम्रो हुनु, सक्षम हुनु वा असक्षम हुनु, सफल हुनु वा असफल हुनुमा धेरै […]
स्वास्थ्य सास फेर्नका लागि हामीले अतिरिक्त बल वा प्रयास गर्दैनौं । किनभने यो शरीरको एक स्वचालित प्रणाली हो, सास फेर्नु । जबकी यसरी सास लिने क्रममा सबैको शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको नहुन सक्छ । जब शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, अनेकथरी रोगले गाँज्न सक्छ । त्यसैले प्राणायाम जस्ता केही विधीको अभ्यास गरिएको छ, जसले […]
September 13, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on पेट खराब त दिमाग खराब
स्वास्थ्य दिमागी स्वास्थ्यको पेटसँग खास सम्बन्ध हुन्छ । यो कुरा डिप्रेशनको उपचार गर्नेलाई भन्दा अरु कसलाई थाहा होला ? ब्रिटेनका मनोचिकित्सक डाक्टर जर्ज पोर्टर फिलिप्सले पछिल्लो शताब्दीको सुरुवाततिर यस्तै अनुभव गरेका थिए । एक दिन डा. फिलिप्स लण्डनको बदनाम अस्पताल बेथलहम रोयल अस्पतालको अनुगमनमा गएका थिए । यो अस्पताल यसकारण बदनम थियो की यस अस्पतालमा […]
स्वास्थ्य खराब खानपानको कारण हाम्रो पेट र आन्द्रा डस्बिन जस्तै भएको छ । यही कारण हामी धेरैजसो पेटका रोगी छौं । कसैलाई अपचको समस्या छ भने कसैलाई पेट फुल्ने, कसैलाई एसिडिटीको समस्या छ कसैलाई ग्याष्ट्रिकको । यस्ता थुपै्र समस्याको कारण पेट फोहोर हुनुपनि हो । जबकी पेटमा भएको सानोतिनो समस्याले पुरा शरीरलाई प्रभावित बनाइदिन्छ । […]